ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်စီးပွားရေးစာမျက်နှာတစ်ခုအားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နည်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2018 Douglas Karr
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အပြောင်းအလဲအများစုမှာကုမ္ပဏီများနှင့်သုံးစွဲသူများအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်၊ သို့မှသာ Facebook သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Google မှကြော်ငြာစျေးကွက်ဝေစုကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုရန်သူတို့သည်သူတို့၏ရှာဖွေနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သည်။ ယခုအခါသုံးစွဲသူများကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာမှတ်ပုံတင်ရန်၊ တည်နေရာအတိအကျဖော်ထုတ်ရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွင်းအတိအကျခွဲခြားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဒီနွေရာသီအစောပိုင်း IFrame မှအက်ပလီကေးရှင်းများသည် Facebook ၏စာမျက်နှာအသစ် Layout ကိုကြေငြာခဲ့သည်, ဒီ infographic အတွက်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအရာကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းအမြင်အာရုံကြည့်ယူပါ။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှု ၅ ခု၊ သင်၏စာမျက်နှာထဲသို့ tabs များထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်အသစ်နှင့် Facebook စာမျက်နှာများ၏အနာဂတ်အတွက် layout အသစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ ပရိုဖိုင်းပုံရိပ်, ပုံကိုဖုံးပါ, ခေါ် -to-action ကိုခလုတ်ကို, စာမျက်နှာ tabsနှင့်အသစ် ရှာဖွေမှု post အားလုံးပြောင်းလဲပါပြီ။ သူတို့က Facebook စာမျက်နှာကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အသုံးဝင်မှုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မယ် Facebook ကိုဘယ်တော့မှအားမကိုးပါနဲ့ သူတို့ပရိသတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကတည်းကငါလုံးဝမ။ ဒါပေမယ့်ငါ Facebook စာမျက်နှာကိုလာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထဲပြန်ဝင်စေဖို့မဟာဗျူဟာတွေဖန်တီးရတာကိုသဘောကျတယ် စာရင်းပေးသွင်းထားသူစာရင်း သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ Martech အသိုင်းအဝိုင်း.
IFrame Apps များ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှပရိတ်သတ်များကိုသင်၏စာမျက်နှာသို့ပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်သို့ဆွဲဆောင်ရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာအသေးများ၊ ကူပွန် tab၊ စတိုးအရောင်းဆိုင်များမှ engagement ည့်သည်များအားသင်၏ Facebook စာမျက်နှာကိုနှစ်သက်စေရန်အလိုအလျောက်သတင်းလွှာဖန်တီးရန်အားပေးခြင်း၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ခ်ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ခဲစုဆောင်းခြင်းကိုဖွင့်ခြင်း။
ယနေ့ IFrame Apps အတွက်စာရင်းသွင်းပါ!
Tags: Facebook ကfacebook စီးပွားရေးစာမျက်နှာFacebook ဂရပ်ရှာဖွေရေးFacebook ကိုစျေးကွက်Facebook ကို optimizationfacebook စာမျက်နှာ optimizationဘယ္လိုfacebook စာမျက်နှာကိုဘယ်လို
သင်၏ Domain အမည်များကိုမည်သို့ရောင်းရမည်နည်း
21:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 16